HILIBKA UGU WANAAGSAN IYO CAANAHA CAANAHA EE LO'DA - XOOLAHA
Noocyada lo'da iyo caanaha
Kalluunka hilibka lo'da iyo meelaha caanaha lagu cuno waa kala duwanaantooda. Badanaa waxa loo qaybiyaa laba nooc: hilibka iyo caanaha iyo caano iyo hilib taas oo ku xiran tayada ay tahay mid tifaftiran. Marka la doorto ilmo gaar ah, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo ujeedada ay tahay xayawaanku, iyo tilmaamayaasha wax soo saarka ah, iyo xaaladaha xabsiyada lagu hayo cunto. Waxaa jira dhowr kala duwan oo ah hilibka aasaasiga iyo caanaha oo leh kala duwanaansho kala duwan, oo aad ka baran doonto si faahfaahsan hoosta.
Farqiga ugu weyn ee dabiiciga ah ee lo'da
Halkan waxaa ah sifooyinka muhiimka ah ee noocyadaasi ay leeyihiin:
universality waa muhiimada ugu weyn ee xayawaanka sida. Labada hilib ee hilibka iyo caanaha ayaa si wanaagsan loo horumariyaa. Taasi waa, waa la ilaalin karaa labadaba ujeedada helitaanka caanaha, iyo in la gowraco iyo helitaanka hilibka;
lo'da ee isdhaafka isku dhafan ayaa fududaynaya dayactirka, maadaama ay ka yar yihiin kuwa wax lagu quudiyo. Lo'da Unitary waxay u baahan tahay xulasho khaas ah cuntada;
waxay helayaan miisaanka iyo si deg-deg ah u tiro badan;
shakhsiyaadka si dhakhso ah ula qabsada xaaladaha cusub waxayna ku habboon yihiin in ay ku tarmaan jawiga qaboobaha;
Diidmada waxaa lagu fulin karaa jajab isku mid ah oo isku dhafan, iyo mid madaxbanaan.
Noocyada ugu wanaagsan ee hilibka iyo caanaha
Doorashada noocan ahi waxay noqotaa mid caan ah. Way fududahay in la joogteeyo, si sahlan loo dhigo oo ku habboon ujeedooyinka oo dhan. Noocyada ugu caansan ee jihadaas iyo tilmaamayaasha wax soo saarka ah ayaa laga wada hadli doonaa.
Ma taqaanaa? Cows la raacay abuurista saameyn koronto ah on Earth. Waxay waxyeello u geystaan ​​bey'adda xitaa in ka badan dhamaanba gawaarida oo dhan - digada iyo gaasku waxay ka koobanyihiin wax ka badan 18% wadarta guud ee saamiga lagu koriyo.
Caanaha waxaa laga helay 50-kii sano ee qarnigii ugu dambeeyay by aqoonyahanka Soofiyeeti. Waddanku wuxuu noqdey waddo gaabin ah Kazakhstan, tan iyo cimilada ay ka badan tahay mid adag, lo'du waxay ku kala duwan yihiin daryeelkooda aan la qabin iyo iswaafajinta wanaagsan. Xayawaanku waxay leeyihiin lugo yaryar, laakiin waxay yihiin kuwo aad iyo aad u awood badan, qoorta yar yar iyo qaybta xabadka. Qofku wuxuu ku koraa 130-150 sentimitir oo dheer. Kobaca ayaa si dhakhsa ah u socda, sida miisaan korodhka, mana aha wax khatar ah inta qofku quudiyo. Muuqaal xiiso leh oo ka mid ah caanaha - dameerka dhagta. Cows waxaa lagu kala soocayaa dastuur adag oo xoog leh waxaana loo yaqaanaa qaababka hilibka.
Tilmaamayaasha wax soo saarka:
korodhka miisaanka waxay u gudubtaa si dhakhso ah: bullsho si dhakhso ah ayey u koraan, horeyba 6 bilood waxay kor u qaadi karaan ilaa 500 kiiloogaraam, ka dibna - iyo ilaa 1 tan oo qaan gaar ah (ka dib 1 sano). Chicks kor u kaca ilaa 600 kiiloogaraam hal sano ee nolosha;
dhalidda hilibka ee ku jiraa - 60%. Macmacaanku waa mid aad u sareeya;
caanaha - dhadhan fiican oo aan dufan lahayn. Tilmaamihii baruurta ee alaabta waxay ku kala duwan tahay qiyaastii 3.9-4.0%. Mid ka mid ah lo'da ayaa siinaya ilaa 4-5 kun litir oo caano ah sanadkiiba;
Soo-jeedi akhriska: Kaliya xiiso leh oo ku saabsan cunnooyinka.
Waxaa laga helay Ruushka, marka la eego qarniyadii XVIII-XIX ee dhulalka gobolka Ulyanovsk ee casriga ah. Kala xulashada lafteeda ma aha mid Ruush ah, abuurkiisa waxaa loo adeegsaday geedka jinsiyadaha Yurub (Dutch, Shorthorn), taas oo lagu daray tiro yar oo degaanka ah, isagoo helay natiijo wanaagsan. Magaca laga helay mulkiilaha Bestuzhev, oo ku hawlanaa taranta taranta. Heerka shakhsiyaadka waa dhexdhexaad ah, qiyaastii 120-130 sentimitir oo qashin ah. Dastuurku waa dhexdhexaad, xayawaanku waxay u muuqdaan kuwo xoog leh, oo leh nidaam lafo-guran oo wanaagsan. Waxay kala duwanyihiin midab casaan, sida kuwa guduudan ee Gorbatov, laakiin leh hooskii daboolka ee dhogorta, mararka qaar waxaa jira shakhsiyado leh midab madow. Muuqaal aad u kala duwan ayaa ah habka difaaca jirka - waxay u adkaysatay cuduro badan, oo ay ku jiraan leukemia iyo tuberculosis. Iskuday mid dhaqaale, maadaama ay si degan u cunaan noocyo aan cunto ahayn. Bestuzhevki fadlan tusayaasha sida:
helaya miisaan si deg-deg ah, tilmaamayaasha miisaanku aad ayay u sarreeyaan: bullaamadu waxay miisaamaan in ka badan 1 tan, lo'da - laga bilaabo 400 illaa 700 kiilo garaam;
dhalidda hilibka - celcelis ka sarreeya, ugu yaraan 55%;
calaamadaha caanaha aad u dheer. Waxay ku tartami karaan caanaha saafiga ah, tan iyo sannadkii hal mar waxay soo saartaa in ka badan 5 kun litir oo caano ah (iyo ugu yaraan 3 kun litir). Waxay leedahay dhadhan fiican oo dhadhan fiican leh, baruurta waxay ka sarraysaa celcelis ahaan - 3.8-4.0%, iyo marka la eego quudinta cawska cagaaran ee casiir leh waxay gaari kartaa 5.5%.
Baro wax badan oo ku saabsan Bestuzhevskaya ee lo'da.
Waxaa la siiyay Carpathians bartamihii qarnigii 20aad. Waxay ka timid astaamaha maxalliga ah, ee loogu yeero makonec ama ryzhek, kuwaas oo la socday shaqsiyaadka Schwyz, Algauz iyo Switzerland.
Dastuurku waa mid xoog badan, qalfoofkuna waa mid cidhiidhi ah oo iftiin leh, geeska hoofka ahi waa xoog badan yahay, maadaama xooluhu si fiican ugu habboon yihiin buuraha. Jidhku waa mid gaaban, laakiin laabta waa mid ballaaran. Kobcinta xayawaanka waxay ku kala duwan yihiin heerarka dhererka 120-130 sentimitir, dharka inta badan waa iftiin la jilicsan ee brown iyo sinjiga. Astaamaha ugu muhiimsan:
korodhka miisaanka si dhakhso ah u socdo - marka laga hadlayo da'da hal sano oo caanuhu waxay helayaan qiyaastii 350 kiilo. Celceliska miisaanka qofku waa 450-500 kiiloogaraam. Bulshooyinka qaangaarka ah waxay miisaamaan ilaa 700 kiiloogaraam;
dhalidda hilibka - fiican, wax yar ka sarreeya. Caadi ahaan hal shakhsi waxaad heli kartaa ilaa 55-58% hilib saafi ah;
wax soo saarka caanaha waxay sameeyaan 3-4 kun litir oo caano ah sanadkiiba. Qiyaasta dufanka celceliska waa 3.5-4.5%, badeecadu waxay leedahay dhadhan jilicsan oo dhadhan fiican leh.
Fiiri talooyinka adoo dooranaya lo'da milanka wanaagsan.
Yorkshire waxaa lagu ridayaa bartamaha qarnigii XVIII ee degaanka Yorkshire County, oo laga helay magacooda. Qarnigii XIX, wuxuu ku faafay guud ahaan Yurub sababtoo ah waxqabadka wax soo saar. Cowsku wuxuu kudhisan yahay midab casaan, midabkiisu wuxuu noqon karaa mid kala duwan. Dastuurku waa mid xooggan, dhammaan qaybaha jidhka ayaa si tartiib ah loo horumariyaa. Heerka shakhsiga ee qashinka waa qiyaastii 130 sentimitir. Dibedda, lo'du waxay u muuqataa mid xooggan, laakiin xaqiiqda ah xayawaanku waa kuwo saaxiibtinimo leh.
korodhka miisaanka aad u dhaqso badan oo aad u xoog badan inta ka hartay dabaqyada lo'du ee isku dhafan. Miisaanka nool ee lo'da way kala duwan tahay qiyaastii 500 kiiloogaraam, miisaanka qashinka waaweyni waa qiyaastii 800 kiiloogaraam;
dhalidda hilibka - celcelis, qiyaas ahaan 45-50%;
calaamadaha caanaha - Aad u sarreeya, soosaarka caanuhu wuxuu noqon karaa 4,5-5 kun litir oo caano ah sanadkiiba. Maadada dufanka waxay ka bilaabantaa 4.4% ilaa 4.6%.
Waa muhiim! Qaab kale oo ah noocyadda Yorkshire sidoo kale waa qaangaar dhaqso ah. Calooshadu waxay kobciyaan heerarka noocaas oo kale ah in ay horey u suurtagal tahay in ay fuliyaan xayiraadaha geedo-abuurka 14 bilood iyo in ay noqdaan farir. Caanaha waa ku haboon tahay taranta kaliya maahan ula jeedo hel hilibka ama caanaha, laakiin sidoo kale kordhiya tirada xoolaha.
Waxaa laga soo qaaday aqoonyahanka Soofiyeetiga ah 50-kii qarnigii la soo dhaafay. Waxay ka muuqatay dhulka Caucasus oo dhan, tan iyo markii xarumaha taranku ay kala firdheen, sababtoo ah weli waxaa jira khilaafyo ku saabsan dalkiisa hooyo, qaarkood waxay tixgeliyaan Armenia, qaar kale - Azerbaijan ama Dagestan. Waxaa laga soo saaray caleenta Caucasian oo lagu qasi jiray Schwyz, Kostroma iyo cunnooyinka Lebedin. Jidhka lo'dooyinkani waa cufan, lugaha way xoog badan yihiin, laakiin gaaban, dastuurku wuu dheer yahay oo xoog badan yahay. Xayawaanku waxay u egtahay mid xoog leh oo joogto ah, wuxuu leeyahay maqaar qaro weyn iyo timo qaro weyn, sidaa darteedna wuxuu u dulqaadanayaa isbedelka cimilada iyo dhibcaha heerkulka. Midabkeedu wuxuu udhow yahay midabyo kala duwan. Dhererka - hooseeya, qiyaastii 120 sentimitir oo qashin ah, marmar marka ay ka sarreyso 130 sentimitir.
Waa muhiim! Cows-ka Cawada waa hoggaamiyeyaasha dhalashada mataanaha. Muuqaal jilicsan - weylaha ayaa yar yar (25-30 kiilo oo keliya), laakiin lo'da waxay dhashaa inta badan inta badan xulashooyinka kale. Intaa waxaa dheer, marka la eego qiyaasta caanahan, mataanaha ayaa badanaa ku dhasha, iyo xitaa saddexda ilbiriqsiyo, tan ayaa loo arkaa inay caadi tahay.
Sifooyinka wax-soo-saarka leh ee Kawaanka:
korodhka miisaanka si dhakhso ah u dhaafaa. Cows ayaa miisaankoodu yahay 600 kiiloogaraam, dibi - 850-900 kiilo garaam;
dhalidda hilibka - 50-55%, oo aan ka badneyn;
tusayaasha caanaha - gaar ah oo aan caddayn. Guud ahaan, suurtagal ma noqon doonto in la helo wax-soo-saarka caanaha waaweyn - lo'da wax ka badan 3.5 kun oo litir oo caano ah oo leh qiyaas dufan ah 3.5%, taas oo ah waxoogaa yar. Laakiin marka la eego waxqabadkeeda, waa wax ka badan tan gaarka ah - dhadhankiisu waa mid aad u sareysa in badanaa loo isticmaalo in la sameeyo delicacies, dhadhan fiican leh, caano qaali ah.
Caanaha ayaa leh taariikh nololeed oo xiiso leh - waxaa loo abuuray shuruudaha dagaalka si gaar ah loogu sameeyo soosaarka degdegga ah ee alaabta tayo sare leh. Waxaa si rasmi ah loo diiwaan geliyay 1945-kii Ruushka waxaana loo tixgeliyaa mid ka mid ah hilibka ugu wanaagsan iyo caanaha. Xayawaankani waxay ku noolyihiin muddo dheer, xoog leh, dhisme iyo mid dhexdhexaad ah. Jirka ayaa si fiican u horumarsan, laakiin lugaha ayaa gaaban. Taabashada cuduro badan, gaar ahaan leukemia. Midabadu waxay noqon karaan guduud ama casaan, oo leh kala duwanaansho midabyo.
Tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee taranka:
korodhka miisaanka - Si dhakhso ah, qashin ayaa ku helaya 900 kiiloogaraam, weylaha - qiyaastii 550-700 kiilo garaam. Calooshu waxay ku dhashaan celcelis ahaan, miisaankoodu waa 40 kiiloogaraam;
dhalidda hilibka - 65%, sababtoo ah taranku wuxuu ku tartami karaa inta kale ee shaygan;
calaamadaha caanaha waxay u egtahay mid sare - waxay u dhigantaa 4-7 kun oo litir oo caano ah sanadkiiba (content fat - 3.9%). Waxay leedahay walxo sarreeya oo ah lactose, qiyaastii 5%, sababtoo ah badeecadu si weyn ayay uga soo baxdaa inta kale.
Ma taqaanaa? Cowsku waa wax la yaab leh muusikada. Zoolojistayaashu waxay aaminsan yihiin in ay ku dhici karaan xaalado kala duwan. Hadda waxaa jira qiyaas ahaan kow iyo toban kala duwan oo leh xayawaanku la xiriiri karo.
Waxaa la siiyay Ruushka qarnigii la soo dhaafay. Kala xulashada adoo ka goynaya lo'da maxalliga ah iyo Tyrolean.
Caanaha laftiisu waa yar tahay, badanaa qofku wuxuu leeyahay dherer aan ka badnayn 120 sentimitir. Muuqaal ahaan, xayawaanku waxay u egtahay mid aad u ballaaran, taa waxaa sabab u ah xaqiiqda dhabarka ayaa ah mid aad u ballaaran, xabadka ayaa leh cabbir dhan 35-40 sentimitir. Dhabarku inta badan waa dharbaaxo, candho xoolo yar yar oo si wanaagsan loo horumariyo. Midabka, sida magaca ayaa tilmaamaya, inta badan waa casaan, iftiin iyo cufan, mararka qaarkood waxaa jira xayawaanka cad. Badanaa, lo'da waxay u egtahay midab u eg midabkoodu. Waxay leeyihiin difaac wanaagsan waxaana lagu qiimeeyaa diidmada sare ee cudurada badan ee halista ah, oo ay ku jiraan cudurrada faafa, gaar ahaan leukemia, brucellosis iyo qaaxada. Tilmaamaha ugu muhiimsan:
korodhka miisaanka - dhexdhexaad ah, sida koritaanka lo'du ay yar tahay. Cows miisaankiisu yahay 600 kiilogaraam, dibi - 900. Dumarka ayaa yar yar, 25-28 kg oo kaliya;
dhalidda hilibka - dhexdhexaad, 55%;
tusayaasha caanaha - yar, qiyaastii 3,000 litir sannadkii, laakiin waxaa lagu gartaa heerar sarreeya baruurta - laga bilaabo 4.2%. Mararka qaarkood waxaa jira caano iyo 6% dufan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Krasnogorbatovskaya taranta ee lo'da.
Daanish deenish ah ayaa ka soo jeeda dhexe ee qarnigii XIX ee ka soo jeeda caleemaha Anglers. Dhalashada, wakiilada lo'da gaaban ayaa la gooyey caanaha la sheegey, badanaaba caanaha deenishka ayaa ka qaybqaatay geedi socodka xakamaynta, iyagoo siinaya faa'iidooyin badan oo deenish ah, sida dhiska xoogga leh iyo miisaanka jirka. Heerka xayawaanka ee xayawaanku wuxuu ku kala duwan yahay calaamadda 130 sentimitir. Dastuurka wakiilada qaansiirka deenishka waa xoog badan yahay, jidhku waa mid dheer oo ballaaran, qeybta dambe waa mid ballaaran, qanjiradu waa weyn tahay. Lugaha waa dherer dhexdhexaad ah, sida luqunta, qalfoofka guud ahaan waa mid xoogan, geesaha ayaa loo ballaadhan yahay. Fiican udder - qaabka saxanka. Midabka ugu weyn ee lo'da waa casaan, waxaa jira hooskii madow. In lo'da, candhuufta ama caloosha hoose waxay mararka qaar dabooleysaa qadar yar oo dhibco caddaan ah oo dhexdhexaad ah. Caanaha deenishka ayaa leh:
korodhka miisaanka waxay si dhakhso ah u dhacdaa, sida hilibka kale iyo caanaha caanaha. Miisaanka lo'da ayaa inta badan isbedbeddelaya, sida waafaqsan heerarka ilamaha, waxay noqon kartaa 550 illaa 800 kiilo garaam. Bullsku waxay helayaan in ka badan 1 tan. Calaqu wuxuu miisaankiisu yahay 35 kg marka uu dhasho;
dhalidda hilibka marka la gowraco - dhexdhexaad ah, dhab ahaan 50%;
calaamadaha caanaha celcelis ahaan, u dhiganta 9 kun litir oo caano ah sanadkiiba, taas oo aad u badan. Xaaladaha dayactirka wanaagsan iyo quudinta oo buuxa, ayaa sidoo kale la heli karaa tilmaamayaasha waaweyn - laga bilaabo 11 illaa 18 kun litir sannadkii. Dufanka caanuhu wuu sarreeyaa, 4.2 (qiyaasta borotiinku waa 3.5%).
Waa wax xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan digaagaha geeska ah ee lo'da.
Ka muuqatay dhulka Ukraine ee qarnigii la soo dhaafay, gobolka Sumy, tuulada Lebedin waxaa loo tixgeliyaa goobaha dhalashada. Dhirta cirridka Ukraine iyo lo'da Swiss ayaa ka qaybqaatay taranta.
Midabka xayawaanku badanaa waa mid fudud, midab madow iyo midab casaan ah, inta badan waa la isku daraa, mararka qaar waxaa jira shakhsiyado leh midab adag. Jidhka hore ee jidhku caadi ahaan waa mid aad u madow, sanka agagaarkana waxaa ku yaala koox caan ah. Qalabku wuxuu leeyahay wax badan oo ka mid ah shakhsiyaadka Schwyz, laakiin aad u xoog badan iyo wax yar ka weyn. Jidhku wuu dheer yahay, dhabarkuna waa ballaaran yahay, laabta way weyn tahay oo qotodheer, lugaha waa dhexdhexaad ah oo aad u xoog badan. Maqaarka, inkasta oo uu qaro weyn yahay, timo qaro weyn leh, waa mid cufan. Madaxa waa gaaban yahay, candho xoolo ah waa mid muuqda oo si wanaagsan loo horumariyey. Dhererka duurka wuxuu u dhexeeyaa 130 ilaa 140 sentimitir. Tilmaamaha wax soo saar ee noocaan ah:
korodhka miisaanka waxay si deg deg ah uga baxdaa lo'da, oo inta badan miisaankeedu yahay 500-550 kiiloogaraam. Bulls ayaa helaya 850-950 kg;
dhalidda hilibka - aad u weyn, waxaad ka heli kartaa 55 ilaa 63% hilib saafi ah. Ku qanacsanahay dhadhanka iyo casriyeynta;
tusayaasha caanaha - sareeya, laga bilaabo 3.2 ilaa 5 kun oo litir sannadkii (content fat 3,6-3.9%). Iyada oo nafaqada wanaagsan, waxaad ku guuleysan kartaa tilmaamayaasha 12.5 kun oo litir oo leh walxo baruur oo ka badan 4%.
Ma taqaanaa? Ka hor, lo'da waa lacag. Ka hor inta aan la dhicin lacagta, sida xayawaankaas loo isticmaalo nolol maalmeedka. Xisaabinta waxaa lagu fuliyay lo'da, qiimaha qiyamka waa la qiyaasay.
Caanaha waxaa laga sameeyay Switzerland, dooxooyinka Sima River. Waxay caan ku noqotay bilawgii qarnigii XIX, marka ay ku faafto adduunka oo dhan iyo dhulka Ruushka. Hadda waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo loo yaqaan 'breed', oo kala ah: Steppe, Volga, Faro, Waqooyiga iyo kuwo kale. Xayawaanka naftoodu waxay leeyihiin muuqaal xoog leh oo awood leh, maqnaashaha waa weyn oo ballaaran, dhabarka xitaa waa xitaa. Lugaha waa mid dhexdhexaad ah, qoortuna waa gaaban tahay, geesaha ayaa si kala duwan loo kala saaraa. Kobaca ku jira miisaanka waa 140 sentimitir, dibedda, waxay noqon kartaa mid sare. Midabka - ciriiri-ciriiri, badanaa oo leh hoos ah casaan ama casaan. Badanaa, wakiillada xulashada waxay leeyihiin madax cad, oo midabka lugaha iyo hoose ee jirka waa caddaan. Tilmaamayaasha Muhiimka ah ee beeralayda:
korodhka miisaanka - dhakhso, lowska ayaa gaaraya 600-700 kiilo garaam. Bulls miisaankoodu wuu badan yahay, badanaa laga bilaabo 770 ilaa 1000 kg. Dumarka dhalashada ayaa inta badan miisaankoodu yahay 40-45 kg. Waxaa lagu qiimeeyaa koritaankooda degdega ah, sanadka ugu horeeya ee kubgisku wuxuu kor u kaco ilaa 400 kiilogaraam;
dhalidda hilibka - Weyn, dadka qaangaarka ah, waxaad heli kartaa 68-70% hilib saafi ah, xayawaanka yaryar way ka hooseeyaan, qiyaastii 55%. Khasaaradu waa tiro badan oo ah lafaha hilibka;
calaamadaha caanaha waxay u dhigantaa 3.5-4 kun litir sannadkii oo leh baruurta 4%.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan lo'da Simmental.
Suksun oo ah lo'da
Waxaa laga arkay gobolka Perm bilawga qarnigii XIX, halkaas oo hadda si xor ah loo furo hadda. Wakiilada ugu horreeya waxaa la helay iyagoo soo maraya lo'da maxaliga ah oo leh buluug casaan ah oo deenish ah. Dastuurka xayawaanku waa mid aad u sarreeya, laakiin waa mid xoogan, qalfoofka si fiican ayaa loo dhisay, saamigal ahaan. Caadi ahaan madaxa iyo qoorta waa dhexdhexaad, laabta ayaa cidhiidhi ah laakiin qoto dheer. Gadaashu waa mid ballaadhan, flat, ballaaran. Udder - dhexdhexaad, maqaarka - dhuuban. Koritaanka lo'da waa 128-130 sentimitir. Midabka - badiyaa waa la googooyaa hadhado kala duwan.
Waa muhiim! Xayawaanku wuxuu leeyahay dhowr dhibcood oo cakiran: sambabada lugaha (xagasha laf-dhabarka lugta wuxuu ka yar yahay 140 darajo, taas oo gaabisa talaabada iyo had iyo jeer waxay horseedaa lameness), iyo sidoo kale daciifnimada muruqa. Markaad naas-nuujinayso qodobadan waa in lagu xisaabtamaa, abuura xaalado lagu ilaalinayo xayawaanka. Daryeelka caafimaadka ee kakooban iyo kormeerka addimada, ku darista cuntada ee fitamiinada dheeraadka ah ee xoojiya nidaamka qalfoofka.
Cawska Suksun wuxuu leeyahay dheeri, waxay si gaar ah u adkeeyaan cudurrada, marar dhif ah ayaa la dhibtooniya ama cudurka qaaxada. Intaa waxa dheer, si fiican u habboon xaaladaha deegaanka.
Tilmaamo waxtar leh:
dhigay miisaan: for lo'da, celceliska waa 500 kiiloogaraam, iyo for bulldo - 950 kg. Calooshoodu way yar yahiin, weylaha miisaankoodu yahay 28, iyo bohol - 30 kg;
calaamadaha caanaha oo u dhiganta 4 kun oo litir sannadkii oo leh baruurta 4%.
Wakiilo ka socda noocaan ah ayaa loo tixgeliyaa kuwa ugu da 'weyn. Waxay u muuqdeen inay ka soo jeedaan dalka Switzerland oo ku soo laabtay qarnigii XIV, waxay si deg deg ah u faafiyeen Yurub oo dhanna waxay noqotay mid aad u caan ah oo ku dhow dhammaan dadka ku nool dalalkaas, gaar ahaan cuntadooda aan qabin iyo xogta caanaha iyo hilibka. Xabadka ka mid ah lo'dooyinkan waa ballaaran yahay, sida waafaqsan heerarka uu le'eg yahay 70 sentimitir, iyo dhererka shakhsiga waa 130 sentimitir. Cawsku wuxuu u egyahay dufan, si fiican u istaag, si adag ugu istaag cagahooda. Dhinaca lugta, lugaha waa gaaban, laakiin tani ma faragalinayso isku dheelitirnaan wanaagsan, maadaama ay si ballaadhan loo dhigay. Dhuxul - gaaban, laakin dharka cagaarka ah ee ka dhigaya cimilada qabow. Midabku waa iftiin, badiyaa cawl ama buluug. Wakiilo ka socda noocaan:
helaya miisaan aad u dhakhso badan. Duufaan sanadkiiba waxay koraan ilaa 350 iyo xitaa 400 kiilogaraam. Kabaha qaangaarka ah oo culeyskiisu le'eg yahay 800 kg, dibiguna si fudud ayuu uga tallaabsan yahay lambarka 1200;
leeyihiin dhalidda hilibka - celceliska ka sarreeya, oo u dhiganta 58-60%;
haysta calaamadaha caanaha oo aan ka yarayn 4 kun litir, inta badan 4.5 kun sanadkiiba. Maadada dufanka ayaa ka sarreeya celcelis ahaan, 3.8%.
Wax badan ka baro cunnooyinka Schwieck.
Появилась на территории Якутии, Россия. История породы также довольно древняя - она была получена от местных бурёнок, которых разводил народ саха, живший на этой территории ещё в XII веке. Кстати, долго считалось, что климат тех земель не позволяет содержать такое животное, как корову, но ещё до революции учёные развенчали подобный миф, основываясь на артефактах, полученных при исследованиях. Muujinta ugu horeysa ee muuqaalka leh waa la'aanta xayawaanka midabka leh, palette color waa mid aad u kala duwan. Sidoo kale, caanaha waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu yar, koritaanka ugu sarreeya ee lo'da celcelisku ka badan yahay 110 sentimitir. Jidhku waa mid awood leh oo xoog leh, madaxa waa weyn, sida qoorta, laakiin gaaban. Lugaha - gaaban, laakiin xooggan, si kala duwan u kala saar. Kabaha Yakut ayaa leh astaamaha soo socda:
korodhka miisaanka - yaryar, lo'da miisaankiisu dhan yahay 360 kg, dibi - qiyaastii 530-550 kg;
dhalidda hilibka - celcelis, 52%. Waxay u muuqataa in aysan aheyn wax badan, laakiin haddii aan tixgelineyno xaaladaha ba'an ee ay ku jirto lo'da la nadiifiyey, waxqabadkuna waa ka sarreeyaa;
calaamadaha caanaha sidoo kale hooseeya, dhalidu waa 1.3-1.4 kun oo litir oo caano ah sanadkiiba, laakiin heerka dufanka ayaa ah mid sare, 6%.
Sidoo kale akhri ku saabsan Yakut mini-lo.
Hilibka iyo caanaha caanaha ee lo'da - mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhulalka dalal badan. Waxay kala soocaan maaha oo keliya tilmaamayaasha waaweyn ee dhalidda caanaha iyo dhalidda, laakiin sidoo kale iyada oo aan la qabin xaaladaha xabsiyada iyo daryeelka. Iyo sidoo kale xayawaanka noocan oo kale ah - doorashada ugu wanaagsan ee beeraha yaryar iyo beeraha gaarka loo leeyahay.